Nexus 2016, nke a maara dika Marlin, ga - enwe mgbawa Snapdragon 821 | Gam akporosis
Google Nexus na-esote (2016), nke aha ya bụ Marlin, ga-enwe mgbawa Snapdragon 821
Ọ bụ ezie na anyị nwere mgbaaka Snapdragon 820 nke Qualcomm n'ahịa, anyị amalitela ịma ụfọdụ ọnya nke ekwentị dị iche iche na-etinye na nkọwa ha ọhụrụ Snapdragon 821; mgbawa nke Qualcomm n'onwe ya ekwuputabeghị.
Ugbu a bụ mgbe anyị na-ahụ ya ọzọ na ihe ga-esote Google Nexus smartphone site na nke anyị nwere ọhụụ ọhụrụ na-etinye anyị tupu ụfọdụ nke nkọwa ya. Ọ bụrụ na anyị maara aha koodu ha, ugbu a, anyị nwere ike ikwu maka ụfọdụ nkọwa ha dịka Snapdragon 821 chip.
Enwere ekwentị abụọ a ga-arụ ọrụ n'afọ a, otu ihe dị mkpa na ọzọ nke ezubere iche karịa na njedebe dị elu, ihe yiri ihe mere na afọ gara aga na Nexus 5x na Nexus 6P. N'oge a anyị amatala na aha koodu aha ọdụ abụọ ndị a bụ Marlin na Sailfish, ma ọ bụ M1 na S1. N'ime ha abụọ, a ga-eche na ọ bụ HTC ga-eme Marlin ahụ.
Ugbu a, anyị nwere nkọwa gbasara ọnụ a ma kwuo ya HTC 10 ga-abụ isi na nke Nexus ekwentị ga-wuru na-emelitere processor na ụfọdụ ndozi. Mpempe Qualcomm Snapdragon 821 ga-abụ CPU emelitere ma nwekwaa ihe mmetụta mkpịsị aka; mmewere na anyị agaghị aghọta ma ọ bụrụ na ọ gụnyere, na ndị ọzọ n'ihi nkwado maka ụdị sensọ a kemgbe Android 6.0 Marshmallow.
Dị ka nsụgharị mbụ nke Snapdragon, mwepu 810 nke na-ekpo oke ọkụ, a na-atụ anya ka 821 nwee ntakịrị arụmọrụ ma nyekwa njikwa njikwa ike. Site na ihe anyị maara ugbu a, Google ga-ekpughe Nexus ọhụrụ ya maka ọnwa nke Septemba maka ihe ga-abụ mbido October. Agbanyeghị, anyị ga-ahụ etu ụbọchị ndị ahụ si aga, ebe Google gosipụtara na a ga-ewepụta gam akporo N na ngwụcha oge ọkọchị, yabụ na ọnwa nke Septemba anyị nwere ike lee nke ikpeazu, nke na-abịarute mgbe niile na ngwaọrụ Nexus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Nexus » Google Nexus na-esote (2016), nke aha ya bụ Marlin, ga-enwe mgbawa Snapdragon 821
Nkọwapụta na nhazi nke OPPO Find 9, ekwentị ọzọ nwere ihu ihuenyo nwere nkenke